Afreximbank in ay ku maalgaliso 300 Milyan oo Doolar Beeraha cusub ee Abidjan - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Afreximbank in ay ku maalgaliso 300 Milyan oo Doolar Beeraha cusub ee Abidjan - JeuneAfrique.com
Afreximbank in ay ku maalgaliso 300 Milyan oo Doolar Beeraha cusub ee Abidjan - JeuneAfrique.com
Benedict Oramah, madaxweynaha Afreximbank, bishii Luulyo 2018 ee Abuja, Nigeria (muuqaalka sawirka). Re Afreximbank
Bangiga dhoofinta dhoofinta Afrika waxaa ka go’an inuu horumariyo oo uu ku shaqeeyo mashruuc xadiiqadaha warshadaha ee 113 hektar ee waqooyiga Abidjan, kaasoo shaqadiisa horumarineed ay tahay inay ka bilaabato 2020.
Bangiga dhoofinta dhoofinta ee Afrika (Afreximbank) wuxuu ku maalgelin doonaa 300 milyan oo doolar beerta warshadaha cusub ee Abidjan, oo ku taal jidka weyn ee waqooyiga. Kaabayaashaas, oo lagu dhisi doono hektar 113, ayaa ah kordhinta aaga warshadaha Akoupé-Zeudji ee hadda ay dhiseyso Shirkadda Cabbinta injineerrada ee Shiinaha (CHEC).
Nofembar 8 ee Abidjan, Benedict Oramah, gudoomiyaha Afreximbank wuxuu la saxiixday heshiis maalgalineed Souleymane Diarrassouba, Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha, iyo Moussa Sanogo, saaxiibkiis Miisaaniyadda.
Burkina Faso - Lassané Kaboré: "In kasta oo ay dhibaatooyinku jiraan, haddana dhaqaalaheennu waa mid adkeysi leh" - JeuneAfrique.com
Khasaaraha macaamiisha TV-ga 2020 ee TV-ga ayaa ka duwanaan kara shacabka Chicago iyo Houston - BGR